အမေရိကန်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားတဲ့သူမှာ ကိုဗစ်ပိုး တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ. – New Of Burmese
အမေရိကန်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားတဲ့သူမှာ ကိုဗစ်ပိုး တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ.
အမရေိကနျပွညျထောငျစု California ရှိ အသကျ ၄၅ နှဈရှိသူ Mr Matthew W. ဆိုတဲ့ သူနာပွုဟာ ဒီဇငျဘာလ ၁၈ ရကျနမှေ့ာ Pfizer ရဲ့ ကိုဗဈကာကှယျဆေးကို ပထမအကွိမျထိုးခဲ့ပါသတဲ့။
စုစုပေါငျး ဆေး dose ပမာဏ 0.3 mL စီနဲ့ ၂၁ ရကျခှာပွီးနှဈကွိမျထိုးရမှာပါ။ သူဟာ ကိုဗဈရောဂါသညျတှရှေိတဲ့ လူနာဆောငျမှာ အလုပျလုပျခဲ့ပါတယျ။ ၆ ရကျအကွာ ဒီဇငျဘာ ၂၄ ရကျနညေ့နမှော ခမျြးဖြားဖြားပွီး ကွှကျသားတှနောကာ ပငျပနျူနှမျးနယျမှုဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒီဇငျဘာ ၂၆ ရကျနမှေ့ာ ကိုဗဈ Positive ဖွဈကွောငျးသိခဲ့ရပါတယျ။
ဘာဖွဈလို့ကာကှယျဆေးထိုးထားပါရဲ့နဲ့ကိုဗဈရောဂါဖွဈခဲ့တာလဲ..လူရဲ့ကိုယျခန်ဓာဟာ antibodies တုနျ့ပွနျမှုအတှကျ အနညျးဆုံး ၁၀ ရကျကနေ ၁၄ ရကျအခြိနျစောငျ့ရပါတယျလို့ ကူးစကျရောဂါကြှမျးကငျြသူ Dr Christian Ramers ကပွောပါတယျ။
ပထမအကွိမျကာကှယျဆေးတဈလုံးထိုးလိုကျခြိနျမှာ ရောဂါကာကှယျနိုငျမှု ၅၀% ရာနှုနျးပဲ ပေးအုံးမှာပါ။ ဒုတိယအကွိမျကာကှယျဆေး booster dose ထိုးလိုကျပွီးမှ ၉၅ % အထိကာကှယျမှုပေးမှာပါ။ ဒါတောငျ ရာနှုနျးပွညျ့ ၁၀၀% ကာကှယျမှုမပေးသေးပါဘူး။ဒါကွောငျ့ကာကှယျဆေးကို လူမြားမြားမှာထိုးနိုငျသလောကျထိုးလေ ပိုပွီးကာကှယျမှုရှိလပေါပဲ။ စုပေါငျးကာကှယျမှုဟာ ပိုပွီးအငျအားရှိစပေါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ကာကှယျဆေးဟာ တကယျ့ကိုကာကှယျမှုပေးပါလိမျ့မယျ။ သို့သျောအခြိနျစောငျ့ရပါတယျ။ လူမြားမြားမှာ မွနျမွနျထိုးပေးနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။ ကာကှယျဆေးထိုးပွီးရငျ Mask လုံအောငျတပျခွငျး၊ လကျသခြောဆေးခွငျး၊ တဦးနဲ့ တဦး ခပျခှာခှာနထေိုငျခွငျး စညျးကမျးတှကေို တဈနိုငျငံလုံး ရောဂါခုခံအား Herd Immunity ရတဲ့အခြိနျအထိ ဆကျလကျလိုကျနာဖို့လိုပါတယျ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု California ရှိ အသက် ၄၅ နှစ်ရှိသူ Mr Matthew W. ဆိုတဲ့ သူနာပြုဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ Pfizer ရဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို ပထမအကြိမ်ထိုးခဲ့ပါသတဲ့။
စုစုပေါင်း ဆေး dose ပမာဏ 0.3 mL စီနဲ့ ၂၁ ရက်ခွာပြီးနှစ်ကြိမ်ထိုးရမှာပါ။ သူဟာ ကိုဗစ်ရောဂါသည်တွေရှိတဲ့ လူနာဆောင်မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၆ ရက်အကြာ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့ညနေမှာ ချမ်းဖျားဖျားပြီး ကြွက်သားတွေနာကာ ပင်ပန်ူနွမ်းနယ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ကိုဗစ် Positive ဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပါရဲ့နဲ့ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ခဲ့တာလဲ..လူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာ antibodies တုန့်ပြန်မှုအတွက် အနည်းဆုံး ၁၀ ရက်ကနေ ၁၄ ရက်အချိန်စောင့်ရပါတယ်လို့ ကူးစက်ရောဂါကျွမ်းကျင်သူ Dr Christian Ramers ကပြောပါတယ်။
ပထမအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးတစ်လုံးထိုးလိုက်ချိန်မှာ ရောဂါကာကွယ်နိုင်မှု ၅၀% ရာနှုန်းပဲ ပေးအုံးမှာပါ။ ဒုတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေး booster dose ထိုးလိုက်ပြီးမှ ၉၅ % အထိကာကွယ်မှုပေးမှာပါ။ ဒါတောင် ရာနှုန်းပြည့် ၁၀၀% ကာကွယ်မှုမပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးကို လူများများမှာထိုးနိုင်သလောက်ထိုးလေ ပိုပြီးကာကွယ်မှုရှိလေပါပဲ။ စုပေါင်းကာကွယ်မှုဟာ ပိုပြီးအင်အားရှိစေပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကာကွယ်ဆေးဟာ တကယ့်ကိုကာကွယ်မှုပေးပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အချိန်စောင့်ရပါတယ်။ လူများများမှာ မြန်မြန်ထိုးပေးနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင် Mask လုံအောင်တပ်ခြင်း၊ လက်သေချာဆေးခြင်း၊ တဦးနဲ့ တဦး ခပ်ခွာခွာနေထိုင်ခြင်း စည်းကမ်းတွေကို တစ်နိုင်ငံလုံး ရောဂါခုခံအား Herd Immunity ရတဲ့အချိန်အထိ ဆက်လက်လိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။
Previous Article ဘယ်လိုတွေများတောင် မောင်းလိုက်တာလဲကွယ်
Next Article လသာတုန်း ဗိုင်းငင်သင့်ပြီလား၊ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ ၁၇၀၀ ကျော် တရုတ်ကနေထွက်ခွါဖို့ပြင်ဆင် ( သာကောတို့အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှာတွေးပူပြီး ထွက်မသွားဖို့ မြူဆွယ်နေရပြီ….)